PHOTOS. Iris Mittenaere waxay isku dayeysaa khibrad cusub oo New York ah iyada iyo gacaliyaheeda - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE PHOTOS. Iris Mittenaere waxay tijaabinaysaa khibrad cusub oo New York ah iyada iyo gacaliyaheeda
PHOTOS. Iris Mittenaere waxay tijaabinaysaa khibrad cusub oo New York ah iyada iyo gacaliyaheeda
Dhowr maalmood, Iris Mittenaere go'aansaday inuu naftiisa siiyo nasasho aad u qaldan oo New York ah. Kaliya maahan in quruxda quruxda badan ay u duushay magaalada oo aan waligeed seexan, laakiin ee shirkada uu jecel yahay cusub. Gabadha da 'yarta ah ee 26 sano waxay lafdhabarta jacaylka saxda ah la gedo qurux badan oo la yiraahdo Diego el Glaoui. Barnaamijka ay joogaan : waa xaflad dabbaaldeg ah oo dhiig leh, oo ku socota Times Square iyo dabcan suxuunta caadiga ah ee Maraykanka si ay ugu raaxaystaan. Iris Mittenaere xitaa waxay qaadatay fursad ay ku raadiso Catriona Grey, Miss Universe 2018.
Intii ay joogeen Grosse-Pomme, Iris Mittenaere iyo saaxiibkiis waxay go’aansadeen inay ku dhiirrigeliyaan waaya aragnimo ay dad yar ku dhiirrigelinayaan ... Labada jacayl ayaa ka faa'iidaystaydiyaarad Helikabtar ah oo ka duushay New York ... iyadoo albaabadu furan yihiin ! Xisaabkeeda Instagram, Miss France iyo Miss Universe 2016 waxay wadaagaan labo sawir, halkaas oo aan ku aragno cagahooda oo madhan, oo leh muuqaal naxdin leh oo magaalada ku sugan.
Halyeeygii jagadiisa, Iris Mittenaere wuxuu sharxay waayidoodii yaraa: "Waxaa jira qaabab badan oo lagu noolaado New York: bartamaha magaalada ee xooggeeda jidadkeeda, ama in yar oo ka sareeya sidii lagu ogaan lahaa quruxdeeda. Waxaan tijaabinay helicopter albaabada u furan. Waa heer sare laakiin waxaan kugula talinayaa halkii aad xagaaga ahayd ... waan barafoobay", ayuu yiri murashaxii hore ee Danse oo leh xiddigihii. Dhowr saacadood ka dib, Iris Mittenaere iyo gacaliyeheeda waxay diyaaradda dib ugu celiyeen Paris ... oo aan hubin inay kululaatay.
Waxaa jira qaabab badan oo loogu noolaado New York: qalbiga magaalada ee xooggooda jidadkeeda, ama in yar oo ka sareeya sidii lagu ogaan lahaa quruxdeeda. Waxaan tijaabinay helicopter albaabada u furan. Waa cajiib laakiin waxaan kugula talinayaa xagaaga ... waan barafoobay ... hadaad rabto inaad kuu sheegto sheeko ii sheeg
Fariin ay wadaagaan Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) mid Nov 8, 2019 at 7: 16am PST
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/photos-iris-mittenaere-tente-une-toute-nouvelle-experience-a-new-york-avec-son-c-1046628
Kate Middleton: Princess Charlotte iyo Prince George ayaa doodaya, khabiir ayaa yidhi
Tijaabooyinka uu sameeyay Amiir Harry wuxuu ka caawiyay sidii looga adkaan lahaa dhaleeceynta, ayuu yiri rugby alumni - "geesinimo la yaab leh"